Imeko yasesikolweni ibala ukuba ingaba indawo ekhuselekileyo ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo inikezwe abafundi ngenjongo yokukhuthaza impumelelo kunye nokukhula. Imeko yasesikolweni ichonga ipesenti yabafundi abafumana uhlobo ngalunye loluleko esikolweni, kunye nenani lokhuseleko kunye neziganeko zoluleko ezenzeka kunyaka wesikolo esikolweni. Iimeko zokhuseleko nezoluleko zichazwa njengezirhoxisiwe, ukugxothwa kunye neziganeko zokuxhatshazwa njengoko kuxelwe zizikolo kwingxelo yokuziphatha. (Umthombo wedatha: unyaka wesikolo ka-2018-2019)
Isabela njani esi sikolo kwindlela yokuziphatha kwabafundi?
Imeko yasesikolweni ibala ukuba ingaba indawo ekhuselekileyo ngokwasemzimbeni nangokweemvakalelo inikezwe abafundi ngenjongo yokukhuthaza impumelelo kunye nokukhula.
I-avareji kaRhulumente 4.8%
Ngaphandle kweZikolo eziShenxisiweyo
I-avareji kaRhulumente 6.3%
Ukubanjwa okunxulumene nesikolo
Mnyama / umAfrika-waseMelika:
I-Hawaiian okanye i-Pacific Islander:
Ukuthumela kunyanzeliso lomthetho
Ukhuseleko kunye neziganeko zoluleko
Funda ngakumbi malunga nokuqokelelwa kweenkcukacha zamalungelo oluntu. https://ocrdata.ed.gov/